Umshini we-Inline Atc Cnc, Umshini weWoodworking Atc Cnc, Umshini weCnc Cutting- JCUT
Umshini we-ATC wezinkuni we-cnc
Umshini we-rout cnc we-Wood
Itholakala eJinan, eSifundazweni saseShandong, eJinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd. (JCUT-CNC) ibhizinisi eliphakeme lobuchwepheshe beCCC elisebenza (ngokwezifiso) kwephaneli ...
Imikhiqizo yethu ifaka phakathi ukulayisha okuzenzakalelayo nokulayisha umshini wokusika we-CNC, izinqubo ezine zokusika umshini wokusika i-cnc, umugqa womshini we-ATC cnc ...
Ikhwalithi ephezulu, ubuchwepheshe obusha, ukusungula izinto ezintsha, kanye nensiza enhle ngemuva kokuthengisa. Ihlinzeka ngemishini ephezulu kakhulu ye-CNC kanye ne-advanced car Car car.
I-1325 ezine spindle nge-line ye-ATC
Ukuchazwa Komshini 1. Ukusika, ukubeka phansi, ukukhahlela, ukubaza (ukwenza imodeli elula). Lezi zinqubo ezine zingasetshenziselwa ukusika kwamakhabhine kanye nokwakhiwa komnyango wekhabethe. Isebenzisa uhlelo olusha lokushintsha amathuluzi oluzenzakalelayo, uhlelo luzenza ngokuzenzakalelayo izidingo zokucubungula ngaphandle kokungenelela kwencwadi. Ama-spindles amaningi asebenza ngasikhathi sinye, enza ngcono ukusebenza kahle kokusebenza. 2. Ifakwe ngetafula le-adsorption yethebhu, iphampu ye-vacuum ingakwazi ngokuphelele ukusebenzisa izinto zokwakha ezinobukhulu obuhlukahlukene, futhi ...
I-ATC izinkuni cnc 1325
Ukuchazwa Komshini 1. Amathuluzi ayishumi nambili agodliwe omagazini abasebenza ngokuqondile abamishini yokushintsha amathuluzi, futhi amathuluzi ayishumi nambili angashintshwa ngokukhululeka ukuze ahlangabezane nemisebenzi enamandla yokucubungula. 2. Ekuhlaziyeni kokugcina, izinzuzo zokuvula kwe-lamino zilethwa ngenqubo yokuhlangana yomhlangano engabonakali engenziwa. Izinzuzo zokuxhumeka okungabonakali kwe-lamino zenza ukuvula kwe-lamino ithandwa kakhulu. Kuqhathaniswa namanye amafomu wesixhumanisi angabonakali, ifomu lomhlangano ...
Ezomnotho ezine inqubo yokwenza umshini wokusika izinkuni u-R4
Ukuchazwa Komshini 1. Umshini wokufaka kanye wokuvula okuzenzakalelayo wezinhlelo ezine wenzelwe amakhasimende ukuthuthukisa ukusebenza kahle. Amakhanda amane alawulwa amasilinda futhi angashintshwa ngokunqunyelwe, angaqedela kalula izinhlelo ezinhlobonhlobo eziklanyelwe ikhasimende (ukucubungula izinto zokusebenza kudinga ushintsho lwamathuluzi ngaphakathi kwamathuluzi we-2-4), Okusindisa ushintsho lwommese oludidayo phakathi nendawo futhi ilungele imikhiqizo yezinqubo eziningi ekukhiqizweni kweminyango yamapulangwe, ifenisha kanye nomsipha ...
Umklamo omusha we-spindle ATC yokhuni cnc router
Ukuchazwa Komshini 1. Intengo iphansi: ilungele amafektri amancane naphakathi nendawo efenisha. Ngisho nomshini wokufaka izikhala we-CNC ophakeme ngezinkulungwane eziyi-12-30, uphansi ngentengo uma kuqhathaniswa nemodeli ephethe isikhwama sokudonsa. Kungumqondo omuhle amafektri wefenisha onomfutho omkhulu wezezimali. 2. Door iphaneli yikhabhathi yokusetshenziswa okubili: Ngokombono ohlelekile, izinqubo ezine zingemodeli elula yokuguqula amathuluzi, esebenzisa izikali ezine ukuqaphela ...
I-1325 disc Ithuluzi le-atc cnc router
Ukuchazwa Komshini 1. Ukusebenza ngokuphezulu: ama-motor ama-spindle amaningi asebenza ngasikhathi sinye, angaqedela ukucubungulwa kwemikhiqizo ngobuningi obukhulu. Uhlelo lokushintsha amathuluzi oluzenzakalelayo oluthuthukisiwe, akukho ukungenelela okwenziwa ngesandla, uhlelo lwenziwa ngokuzenzakalelayo. Usebenzisa itafula le-adsorption yetafula lomhlaba wonke elihamba phambili, lifakwe ngepompo vacuum enamandla e-adsorption, design zone zone, adsorption eqinile yezindawo ezahlukahlukene zezinto zokwakha, ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi. 2. Kuyashesha ...
Umshini we-Atc funiture
Ukuchazwa Komshini 1. Lo mshini usebenzise i-GDZ noma i-HQD brand Air Cooling Spindle. I-9kw amandla aphezulu ayindilinga, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu. Kusetshenziswa uhlelo oluzenzakalelayo lokushintsha amathuluzi, ukuguqulwa kwamathuluzi okusheshayo. 2. Ifakwe nge-servo motor, i-high-precision gear kanye ne-rack drive engeniswayo, okwenza umshini ugijime uqinile, ngomsindo ophansi, isivinini esisheshayo nokunemba okuphezulu kokuma. 3. Umbhede wokuguguleka we-heavy-duty ukuguga kokugaya ngokunemba okungu-0,02mm). 4. Inqubo yemishini yombhede ovumelanayo ovumelanayo ...
I-Linear atc cnc router
Ukuchazwa komshini 1. Ukuqina kwesakhiwo: lonke uhlaka lwensimbi luhlanganiswe ndawonye, ​​oluphathwe yi-vibration (tempering) ukuguga, futhi akukho kudilizwa ngemuva kokusetshenziswa isikhathi eside. 2. I-Taiwan Syntec yohlelo lokulawula ukusebenza kwezimboni olusebenza kahle, enekhwalithi enhle eqinile, ukulungiswa okuhle, ingalawula ukuqedwa kokusebenza kwe-3D okungamasendla amaningi, okusheshayo, ukucubungula okubushelelezi kwe-3D, ukubaza nokusika. 3. Spindle motor ingeniswa kusuka Italy HSD amandla aphezulu ithuluzi umoya-selehlile, nokunemba okukhulu, ...
I-Wood router ye-atc
Ukuchazwa Komshini 1. Ukufiphaza, ukubhoboza, ukusika, ukuhola okuholela, ukugaya, njll., Ukushintshashintsha kwezinguquko kwekhanda ngaphansi kommese, inqubo yokuguqula ummese ngaphandle kokuphazamiseka, ukufezekisa okuzenzakalelayo. 2. Ukulawula isikhombimsebenzisi sokuqamba, ukusebenza kweziwula, opharetha bangaba semsebenzini ngemuva kokuqeqeshwa okulula, asikho isidingo sabasebenzi bezobuchwepheshe.Umshini uqhubekela phambili kahle, ukusebenza kahle kuphezulu, kukusiza ukuthi uqaphele ukuvuthwa kokukhiqiza. Umshini wamukela i-HQD ephezulu ye-air-coindled spindle, iseva ephelele ...
Izinzuzo zomshini wokusika we-CNC
Umshini wokusika we-CNC, owaziwa nangokuthi njengezinto ezihlakaniphile zemishini yokukhiqiza ifenisha. Njengoba igama lisho, zonke izinqubo ezivela ukulayisha, ukusika, ukumba umgodi okuqondile nokufakwa kuhlu kwepuleti kuqediwe ekuhambeni okukodwa. Ibeka ngokuphelele indawo yokukhiqiza nokucubungula. Ngakho-ke, yini ...
Ulwazi lokulungisa umshini we-JCUT CNC
Inkinga yendabuko yilena: 1. Umshini wokufaka engakaze ugcinwe: isaladi sesitimela esiqondisiwe sakhiwe kabi, ijubane lomshini lihamba kancane, umphumela womsebenzi awulungile, impilo yomshini ayimpofu, izembe le-Z linamathele, i-diagonal iphutha likhulu, futhi i-angle angle yokukhetha ayilungile! Umshayeli ...
R9 uchungechunge CNC umshini wokushayela R9 uchungechunge CNC umshini wokushayela: Umshini osebenzayo: ukusikwa kwe-punotot kungasetshenziselwa ukucubungula ibhodi uhlobo lwefenisha yokuhamba yokulinganisa ukucubungula ikhabethe umnyango isembozo umnyango umnyango iphakethe elithambile real ukhuni ingaphakathi umnyango solid ifenisha computer ifenisha. Uchungechunge lwama-R7 CNC ...
UKUXHUMANA MAHHALA +8618006360664
UKUXHUMANA MAHHALA +8615863173380